» इतिहासलाई इतिहास बनाऊँ -प्रदीप नेपाल:Namasteeurope.com
इतिहासलाई इतिहास बनाऊँ -प्रदीप नेपाल
नेपालको इतिहासमा चासो राख्ने विद्वान्सँग मेरो अनुरोध हो यो । विशेष गरेर इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान गरेर किंवदन्तीका रूपमा अलमलिइरहेको नेपालको इतिहासलाई वास्तविक इतिहास बनाउने कामतिर विद्वान्हरूको ध्यान जाओस् ।
यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालको इतिहास किंवदन्तीमै टिकिरहेको छ । स्वयं नेपाल नाम नै किंवदन्ती बनेको छ । )‘‘उपत्यकाको पानी सुकेपछि विष्णुमती र बागमतीको दोभानमा तपस्यारत ने मुनिले धर्माकरलाई राजा बनाए । त्यसैले ने मुनिका नामबाट यो देशको नाम नेपाल राखिएको हो । ’’ यो हामीले पढिरहेको कुरा हो । त्यसो भए त्यसभन्दा अघि यसको नाम के थियो ? कि नेपाल नाम राखिने कुनै अर्को वैज्ञानिक कारण थियो ? हामीले पढ्दा दोस्रो कारण बताइएको थियो– उपत्यकाका पाखाहरूमा भेडा पालन गरिन्थ्यो र चीन, तिब्बततिर ऊनका सामान बिक्री गर्न लगिन्थ्यो । त्यसैले चिनियाहरूले यो उपत्यकालाई उनीहरूको भाषामा नेपाल भनेका हुन् । चिनियाहरूको भाषामा नेपाल भनेको उनको देश हुन्छ रे । थोरै वैज्ञानिकजस्तो भए पनि रे भनेपछि त्यो पनि कथा नै भयो । आजभोलिका चिनियाहरू नेपाललाई निपोर भन्छन् । बाँकी मिलाउने जिम्मा भाषाविद्हरूको ।
अर्को कथा छ– चीनबाट आएका महामञ्जुश्रीले फूलचोकी र चन्द्रागिरीमा चोभारको गल्छी काटे । बागमती नदी मडारिँदै त्यहाँबाट बाहिरिन थालेपछि काठमाडौं दहका नागका राजा कर्कोटकले महामञ्जुश्रीसँग आफ्नो बासस्थानका लागि अनुरोध गरे । मञ्जुश्रीले टौदहमा गएर बस भनेपछि पानीको एउटा भङ्गालो त्यता लगियो आदि ।
यस्तो पनि इतिहास हुन्छ कतै ? काठमाडौं उपत्यका विशाल जलाशय थियो । यो विज्ञान प्रमाणित सत्य हो । त्यसको निकास चोभार नै भयो । किनभने चोभारको गल्छी सबैभन्दा होचो थियो । तर एकदिनमा कसैले काटेर चोभार उपत्यकाको जलाशयको निकास बनेको होइन । सयौं वर्षको पानीको कटानले त्यसलाई निकासयुक्त गल्छी बनायो । प्रमुख रूपमा शिवपुरीको जलाधार क्षेत्रबाट निस्किएका साना ठूला नदीहरू बागमती नदीमा मिसिएर चोभारबाट बाहिर निस्किए ।
उपत्यका विशाल जलाशय हुँदा पनि पाखापखेरामा मानव बस्ती थियो । पानी सुक्दै जाँदा ती बस्तीहरू पनि तलतल झर्दै गए । प्रामाणिक रूपमा अहिले भेटिएका पौराणिक बस्तीहरू थानकोट, बुढानीलकण्ठ, चम्पादेवी र साँखुतिर थिए होलान् । पानी सुक्दै गयो । बस्ती त्यहाँबाट पनि तल तल ओर्लिंदै गयो । नाग भनेको सर्पको हुल होइन । नाग एउटा जाति हो । चीनबाट आएकाहरूसँग लडाइँ चलेर हारेपछि त्यो चोभारको बाटो हुँदै दक्षिणतिर लागेको हुनसक्छ र उपत्यकाको फाँटमा मानव बस्ती बसेको हुन सक्छ । वरिपरि बस्ती बढेपछि किंवदन्ती पुरुष ने मुनिको चर्चा गर्न सकिन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हुन सक्छ । तर ने मुनिलाई नै नेपालको आदिपिता भन्नु चाहिँ गलत हुन्छ ।
सीता र भृकुटीलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति मानिएको छ । तर सीताको बारेमा कुनै अनुसन्धानीय ज्ञान हामीसँग छैन । पहिलो त सुन वा चाँदी, जेको हलोले जोतेको भए पनि जमिनबाट बालिका जन्मिदैनन् । आजभन्दा तेत्तीस–चौँतीस सय वर्ष पहिले त्यस्तो पातिवत्र्य धर्मको अस्तित्व कुनै हिसाबबाट पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन । यदि यो सत्य हो भने रामलाई नेपालीले ज्वाइँ भनेर पुजिरहनु पनि पर्दैन । उनका कारण हाम्री सीता माताले बाँचुञ्जेल आँसु झार्नुप¥यो । त्यसैले आजको सन्दर्भमा उनी महिला हिंसाका नकारात्मक पात्र पो मानिन्छन् ! हाम्री सीता मातालाई धरधरी रुवाउने र आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याउने काम गरेका छन् अयोध्याका राजा रामले । संस्कारबाट मुक्त हुने र विज्ञानसम्मत ढङ्गले सोच्ने हो भने हामी ‘रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम’ भन्नै सक्दैनौं ।
पौराणिक कालको इतिहासको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा विज्ञहरूको ध्यान यतातिर जाओस् । चौँतीस सय वर्ष पुरानो इतिहासमा महिला दासी भएकी थिई ? पातिवत्र्य धर्मको इतिहास त्यति पुरानो हुन सक्छ ? के साँच्चै राम–रावण युद्ध भएको थियो ? तमिल विद्वान एवं मिथक अनुसन्धानकर्ता मक्कामला नागभूषणम्ले रामायणमा जस्तो प्रकृतिको चर्चा गरिएको छ, त्यो उत्तर भारतमा मात्र पाइन्छ भनेका छन् । तिनैले रामायण धेरै भाषामा लेखिएको छ र तिनका बीचमा चिताइ नसक्नुको भेद छ भनेका छन् । यहाँनेर नेपालका भौतिकवादी पुराणवाचक विद्धान बालकृष्ण पोखरेलको खस जातिको इतिहास पनि एकपल्ट कोट्याउनु पर्छ । पोखरेलका अनुसार रामायणको लडाइँ भारतीय उपमहाद्वीपमा भएकै थिएन ।
ऐतिहासिक कालखण्डको इतिहासका कतिपय पानाहरूमा पनि अहिलेसम्म अन्योल छ । सीताजस्तै भृकुटी पनि नेपालको राष्ट्रिय विभूति हुन् । भृकुटीलाई अंशुवर्माकी छोरी भनिएको छ । अंशुवर्माकी छोरी भएका कारण कैलाशकुट भवनको भव्यतामा भृकुटीको लालन पालन भयो । यस्ता महासामन्त अंशुवर्माकी छोरीको बिहे तिब्बती राजा स्रङ्चन ग्यम्पोसँग हुने कुरो उति पत्यारलाग्दो हुन सक्तैन । लिच्छविकालको त्यो सत्ता सङ्घर्षमा राजकुमार ध्रुवदेव सपरिवार तिब्बतमा शरण लिन पुगेका थिए । भृकुटी तिनकी छोरी हुन सक्छिन् । विवाहपूर्व नै तिब्बती जीवनशैली भोगेकी राजपुत्रीले स्रङ्चन ग्याम्पोसँग बिहे गर्ने कुरो बढी सान्दर्भिक हुन्छ । सीताभन्दा सजिलो गरी भृकुटीको इतिहास पत्ता लाग्न सक्छ इतिहासविद्ले विशेष ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने हो भने ।
अझै बिजोकको कथा छ हामीसँग तीन सय वर्ष अघिको । नेपालका इतिहासकारले पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खालाई महाराणा प्रतापको वंशज मान्दछन् । यो त ठाडो झुट हो । तर कसैलाई पत्याउन मन लाग्दैन । यही मन नलाग्ने रोगका कारण हामी सबै भ्रमको इतिहास पढिरहेका छौं ।
पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा नेपालका खाँट्टी मगर थिए । काठमाडौं पश्चिममा उतिबेला मगर राजकै बाहुल्य थियो । द्रव्य शाहले कुदेर लिगलिग कोट कब्जा गरे र उनले गोर्खाको खड्का राजालाई पराजित गरेर गोर्खा कब्जा गरेका थिए । राम शाहकी रानी मगर पुत्री थिइन् र आफ्ना असल कामका कारण उनी मनकामना माइ भएकी हुन् । मनकामना मन्दिरको पुजारी मगर जातको हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ । स्वयं पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो बिहे मगर राजा हेमकर्ण सेनकी छोरीसँग भएको थियो । राजा हुन क्षत्रीय हुनुपर्छ भन्ने ज्योतिष ब्राह्मणका कारण उनले बनारसमा गएर गोत्र परिवर्तन गरी काँधमा जनै पहिरिएका थिए र त्यतैकी राजपुत कन्यासँग बिहे गरेका थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई किंवदन्ती पुरुष बनाउने कोसिस अन्त पनि गरिएको छ । गुरु गोरखनाथको छाद खान नमानेर खुट्टामा झरेको सन्दर्भ किंवदन्ती मात्र हो । ‘छाद खाएको भए चिताएको पुग्थ्यो, खुट्टामा परेको हुनाले जित्नका लागि तैँले त्यो भूमिमा टेक्नैपर्छ’ भन्ने आशीर्वादले पृथ्वीनारायण शाहको पौरखको गीत गाउँदैन । पृथ्वीनारायण शूरा मात्र थिएनन् । उनी दूरदर्शी पनि थिए भन्ने उदाहरण उनको जीवनको अध्ययन गर्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ । देशभित्रको सन्दर्भमा उनले भनेका ‘प्रजा सुखी भया दरबार बलियो हुन्छ’ र सीमा बाहिरको सन्दर्भमा ‘दक्खिनको वादशाह महाचत्तुर छ’ भनी दिएको अर्तिले उनको दूरदर्शितालाई प्रस्ट पार्छ ।
अज्ञानी भनौं कि बाठा पश्चिमी ज्ञान प्राप्त आधा दर्जन डा. साहेबहरूले नेपालको इतिहासलाई यतिबेला झनै भद्रगोल बनाएका छन् । नेपालका आदिबासी खस जातिका मानिस हुन् । झण्डै छ हजार वर्ष अघि तिनीहरू ककेससबाट पूर्वतिर लागे । सिधै आउँदा उनीहरू मानसरोबर आइपुगे । मानसरोबरबाट दक्षिण लागेका कसहरू, खस भएर जुम्लाबासी भए । खसको जात थिएन । खसहरू बोन धर्मका नजिक थिए । ईश्वर तिनीहरूका लागि निराकार थियो । उनीहरू जुम्लाबाट विभिन्न दिशातिर पैmलिए । बिस्तारै उनीहरू बाहुन, क्षेत्रीमा विभाजित हुँदै गए । कालान्तरमा उनीहरू दलित पनि भए । त्यसैले खस जातिका बाहुन क्षेत्री र दलितहरूको थर मिलेको हो । जुम्लाबाट ओरालो लागेका बाहुन क्षेत्रीहरू उनीहरूभन्दा तीन हजार वर्षपछि नेपाल पसेको कान्यकुब्जी ब्राह्मण संस्कृतिप्रति झ्याम्मिदै गए । खसहरूको यही गल्तीका कारण यतिबेला उनीहरू ‘अन्य’ भएका छन् भने उनीहरूभन्दा चार हजार वर्षपछि नेपाल आएकाहरू आदिवासी भएका छन् ।
ती खसहरूको वर्तमान परिचय के हो ? तिनीहरू मस्टो पूजक हुन्छन् । मस्टो पूजन निराकार हुन्छ । तिनीहरू कुलपूजा गर्छन् । कुलपूजामा कुनै देवदेवी हुँदैनन् । कुलपूजामा हुन्छन् लोहोरो आकारका केही ढुङ्गाहरू । आजको राजनीतिक विश्लेषणमा अन्य बनाइएका खसहरू चिनारी अहिले यही मस्टो र कुलपूजामा बेरिएको छ ।